नेवारी पहिरनमा किर्तिपुरमा तरकारी बेच्दै शिशिर भण्डारी ! के युटुब छोडेका हुन ? (भिडियो हेर्नुस) – सुदूरखबर डटकम
नेवारी पहिरनमा किर्तिपुरमा तरकारी बेच्दै शिशिर भण्डारी ! के युटुब छोडेका हुन ? (भिडियो हेर्नुस)
label shishir query_builder August, 13 2019
तपाईहरुको माया साथ सपोर्ट र आशिर्वादले बिभिन्न समाजिक कामहरु गरिरहंदा हिजोको दिनमा हामी एक म्युजिक भिडियोको छायांकनमा व्यस्त रह्यौं । किर्तिपुरमा खिचिएको मायालु बोलको नेवारी परिवेशको यो म्युजिक भिडियो चांडै नै युटुब मार्फत तपाई मांझ आउनेछ । गीतमा बुगिवुगी की बिजेता बहिनी कविता नेपालीले मोडेलको रुपमा साथ दिएकी छिन् । अष्ट्रेलियामा रहेका संजीव खरेलको गायन, संगीत र शव्द रचनामा तयार भएको मायालु बोलको यस गीतमा एक नेवारी युवती र त्यहि टोलमा तरकारी बेच्ने केटाको प्रेमलाई देखाईएको छ ।
प्रबिन भट्टको निर्देशनमा तयार भएको म्युजिक भिडियोलाई करण चौसिरले खिचेका हुन् । दर्शकबृन्द प्रबिन भट्ट गलबन्दी, बोल माया, र्याप व्याटल लगायत थुप्रै सुपरहिट गीतका सम्पादक र पछिल्लोचर्चित गीत कसरी कसरी का निर्देशक पनि हुन् । गीत छायांकनमा निकै रमाईलो भएको थियो । लगातार आईसक्रिम खाने दृश्यदेखि खर्पनमा तरकारी बेच्न हिड्दाको दृश्य खिच्दा रमाईलोको सिमा रहेन ।
युटुबबाट ७ दिन हराएका शिशिर भण्डारीले अचानक यस्तो भिडियो ल्याए ! चितवनमा यस्तो भेटियो (भिडियो हेर्नुस)
सरस्वती लामा भन्छिन पहिला मजा लिएर हेर्छन अनि पछि छि-छी गर्छन [भिडियो हेर्नुहोस ]
भक्तपुर काण्डको खुल्यो नयाँ रहस्य आखिर किन आफ्नै आमाको ज्यान लिन १२ लाख खिर्चिन राक्षसनि छोरीले [भिडियो हेर्नुहोस ]
डान्सबारमा नचाउन सुइ लगाइ जबरजस्ती सुरेन्द्र बाट प्रियंका बनाइए पछी उनको वास्तविकता सुन्दा आशु आउछ,यस्तो सम्म गरे पापिहरुले [भिडियो हेर्नुहोस ]
मृत्युलाई जितेर पुनर्जन्म प्राप्त गरेका केशब सिंह भन्छन् मलाई अझै बाँच्ने रहर कृपया मलाई बचाइदिनुहोस् ( भिडियो सहित)
जेलभित्रबाटै रबि लामिछाने पहिलो पटक बोले ! भने- मलाई ५ बर्ष नै थुन्न खोज्दैछन्, म प्रहरीबाट नै असुरक्षित महसुस गर्दैछु (भिडियो हेर्नुस)
रवी लामिछानेको लागि बोल्दा डराउने गाइ चराउन जाउ,ज्ञानेन्द्र शाहीले गरे अहिले सम्मकै कडा कुरा(भिडियो हेर्नुहोस )
चितवन पुगेका शिशिर भण्डारी एक्कासी रुदै आए । रबि लामिछानेका लागि हेर्नुस..यस्तोसम्म भयो (भिडियो हेर्नुस)
रबि लामिछाने पत्नी निकिताले महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा गएर दिइन यी तिन जनालाई जाहेरी, दाजुले यसो भने (पुरा भिडियो)
शालिकराम पुडासैनिको प्रेमिका भनिएकी अस्मिता कार्की यस्ती छिन र उनको बयान यस्तो छ,निर्दोश साबित होलान रवी ? (भिडियो हेर्नुहोस )
८६ बर्सिय वृद्धलाई प्रहरीले कुटेर शरीर भरी निलडाम, बुबा रुदै “मलाई दुखेको छैन, कुटाइ खान अझै तयार छु (भिडियो हेर्नुहोस )